वर्षाका कारण सात अर्बको धानबाली नष्ट – Dcnepal
Mon, 06 Dec, 2021 | २०७८ मंसिर २० गते
कांग्रेस गण्डकी प्रदेशमा सहमहामन्त्रीसहित लमजुङका पाँच जना निर्वाचित
युभेन्ट्स पाँचौ स्थानमा उक्लियो
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज पक्राउ
इंग्लिस प्रिमियर लिग: युनाइटेड र टोटनहम विजयी
शाम्भवी महामुद्राको अभ्यासले तपाईँलाई महासमाधिको स्थितिमा पुऱ्याउन सक्छ
एमबीबीएस पढाइकाे उद्घाटन गर्न आगामी आइतबार जुम्ला आउँदै राष्ट्रपति भण्डारी
आज शिवालयकाे दर्शन गर्नु शुभ, थाहा पाउनुहाेस् तपाईँकाे राशिफल
ओमिक्रोन सङ्क्रमण भएको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने ?
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा पौडेल पक्षका पुन विजयी
वर्षाका कारण सात अर्बको धानबाली नष्ट
प्रकाशित : २०७८ कार्तिक ८ गते १५:३१
काठमाडौं । वर्षाका कारण धानबालीमा रु सात अर्ब २२ करोड क्षति भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार करिब ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई लाख ५८ हजार ९२ मेट्रिकटन परिमाणमा धानको क्षति भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, कपिलवस्तु, बाँके र रुपन्देहीमा करिब ४२ हजार हेक्टरमा एक लाख ६१ हजार २२३ मेट्रिकटन धान नोक्सान हुँदा रु चार अर्ब ५१ करोड क्षति भएको छ । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा करिब १८ हजार हेक्टरमा ६८ हजार ४०० मेट्रिकटन धान क्षति भएको छ । सोको बजार मूल्य रु एक अर्ब ९१ करोड हुन्छ ।
प्रदेश नं १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा सात हजार ४९२ हेक्टर क्षेफलमा २८ हजार ४६९ मेट्रिकटन बालीमा नोक्सान पुगेको छ । यसको बजार मूल्य रु ८० करोड हुन आउँछ । गत असोज ३१ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा भएको अविरल वर्षाका कारण विशेषगरी यस क्षेत्रका किसान समस्यामा परेका छन् । अन्य प्रदेशमा पनि केकस्तो नोक्सान भएको छ, त्यसको अभिलेख सङ्कलन गर्न मन्त्रालय मातहतका प्रदेश कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सम्बन्धित पक्षलाई राहत सहुलियत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट पनि अनुगमन समिति गठन गरी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । मन्त्रालय र प्रदेशका अधिकारीबीच समन्वय र समझदारी कायम गरी प्रभावित कृषकलाई सहयोग प्रदान गरिने जनाइएको छ । वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी तथा डुबानले १०० भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ ।
विभिन्न स्थानका सडक मार्गसमेत नोक्सान भएका छन् । कृषकले धान भित्र्याउने समयमा भएको वर्षाले यस वर्ष ठूलो नोक्सानी भएकाले राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत कमी आउने अनुमान गरिएको छ । धानलगायत अन्य बाली रोप्ने समयमा रासायनिक मलको समस्या सँधै हुने गर्दछ । मौसमका आधारमा बर्खे धान, चैते धान, भदैया धान र घैया धानसमेत उत्पादन हुने गर्दछ ।
नेपालमा अन्नबालीमा धानलाई प्रमुख बालीका रुपमा लिइन्छ । करिब दुई दशकदेखि प्रत्येक वर्ष असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा मनाइन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले योगदान गरेको छ । त्यसमा पनि कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान करिब २० प्रतिशत छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिबाट मानिसलाई आवश्यकपर्ने क्यालोरी चामलमा राम्रो हुन्छ ।
कूल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत यस क्षेत्रमा आश्रित छन् । मुलकमा राम्रो धानखेती हुने क्षेत्र तराई भए पनि पहाडमा हावापानीअनुसारको स्थानीय धान उत्पादन हुने गर्दछ । उच्च क्षेत्र जुम्लालगायत केही हिमाली जिल्लामा पनि स्थानीय धानखेती हुने गर्दछ । मनाङ र मुस्ताङबाहेक अन्य जिल्लामा धानको खेती हुन्छ । देशको करिब १६ लाख हेक्टरमा धानखेती भइरहेको मन्न्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल ६३ जातका धानको खेती गरिन्छ भने पछिल्लो पाँच वर्षयता करिब ५० देखि ५६ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेको अभिलेख छ । “केही दशक अगाडि हामीले विदेशमा चामल निर्यात गर्ने गरेकामा केही वर्षदेखि चामल आयात गरेका छौँ”, प्रवक्ता सञ्जेलले भने । गत वर्ष नेपालले करिब रु ५० अर्बको चामल आयात गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले व्यापार घाटालाई बढाएको छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ ।
विश्वका ११४ मुलुकमा धानको उत्पादन हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने मुलुक चीन हो । विश्वमा करिब १७ करोड हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिन्छ भने करिब ७५ करोड मेट्रिकटन धान उत्पादन हुन्छ । कूल उत्पादनको ८० प्रतिशत धान खपत एशियामा हुने गरेको छ ।
लैङ्गिक हिंसा अत्य गर्न महिला र पुरुषको आवश्यकता पर्दछं: विद्यादेवी भण्डारी :राष्ट्रपती
राप्रपा महाधिवेशन निर्वाचन भृकुटीमण्डप
राप्रपालाई फुटाउने पक्षमा छैनौ जुटाउने पक्षमा छौ राप्रपा: महाधिवेशन प्रतिनिधि
राप्रपामा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी अभिनेत्री रेखा के भन्छिन् ?
धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा यसरी जंगिए राप्रपा नेता
राप्रपा फुटाउन थुप्रै प्रयास भए : टोपबहादुर वली
विमानको पाङ्ग्रामा झुण्डिएर मृत्युको यात्रा, साढे २ घण्टा उडिरहेको जहाजबाहिर झुण्डिए
चिहान खनेर साथीको लाश निकाले, मोटरसाइकलमा हालेर सहर घुमाए, यस्तो थियो कारण
बारबाडोसमा महारानी एलिजाबेथलाई राष्ट्रप्रमुखबाट हटाएर गणतन्त्रको घोषणा गरिँदै
पाकिस्तानमा आफ्ना नागरिकलाई जलाइएपछि श्रीलंकाले के भन्यो ?
ग्राहकका लागि अश्लील भिडियो खिच्दा झुक्किएर मोडलले आफ्नै गुप्तांगमा गोली हानिन्
चितवनबाट एमालेमा १० केन्द्रीय सदस्य, दुईपटक सांसद बनेका पोखरेल अटाएनन्
पाकिस्तानमा श्रीलंकाली नागरिकको जलाएर हत्या, श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको इमरानसँग यस्तो अपिल